Vaovao - hatraiza ny fahafaha-manana ananan'ny tsenan'ny boky?
Kitapo vita amin'ny taratasy manokana
Boaty taratasy manokana
Hatraiza ny fahafaha-manana ananan'ny tsenan'ny boky?
Navoakan'i Sina Education ny "Taratasy Fotsy momba ny fanjifana ny fianakavian'ny fianakaviana Shinoa 2017" (izay antsoina hoe "White White") andro vitsy lasa izay. Ny "Taratasy Fotsy" dia mampiseho fa mitombo hatrany ny tahan'ny fihinanana fampianarana an-trano. Maherin'ny 50% ny ray aman-dreny mino fa ny fanabeazana ny zanany dia zava-dehibe kokoa noho ny vola lanin'ny fianakaviana hafa. Mba hananan'ny zanak'izy ireo ho avy tsara dia nanomboka nanararaotra fotoana, hery ary vola be tamin'ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny nandritra ny fahazazany. Amin'ny maha iray amin'ireo fomba mivantana indrindra amin'ny fanabeazana ny ankizy, ny ankizy mamaky boky dia lasa tsena mafana miaraka amin'ny fahaiza-manao fampandrosoana lehibe.
Ny famakiana taratasy dia mamboly fifantohana sy fisainana
Tao anatin'izay taona lasa izay, be dia be ny "fahafatesan'ny famakiana taratasy" no niparitaka tamin'ny Internet, ary inoana fa noho ny fiatraikany amin'ny famakiana elektronika, ny famakiana taratasy dia hiala tanteraka amin'ny sehatry ny famakian'olombelona. Fa izany tokoa ve no izy? Hatramin'ny fivoaran'ny e-famakiana, na dia niteraka olana be aza ny famakiana taratasy, dia tsy ho lany andro ny famakiana taratasy, satria ny famakiana taratasy dia manana tombony maro izay tsy azo soloina famakiana elektronika.
Ny famakiana taratasy dia manondro fomba famakiana izay mampiasa taratasy ho mpitatitra, izay tsy mitovy amin'ny famakiana elektronika. Manana sanda tokana ary manome traikefa tsy manam-paharoa amin'ny olona. Voalaza fa ny zavatra iainan'ny olombelona dia mety hahatratra ny fara tampony amin'ny famakiana taratasy. Raha ampitahaina amin'ny famakiana nomerika, ny famakiana taratasy nentim-paharazana dia mifantoka bebe kokoa amin'ny dikan'ny hoe "mamaky" mihitsy, mamela ny mpamaky hamaky am-pitoniana, mba hahazoany fahalalana lalina, hiaina marina ny hatsaran'ny literatiora, ary hiaina ny kanto mampiavaka ny kanto amin'ny fiteny .
Ny famakiana dia tsy fihetsika famakiana tsotra. Izy io dia manana fiheverana, fisainana ary singa samihafa. Na dia eo ambanin'ny fiantraikan'ny haitao elektronika aza dia hitondra fiovana lehibe ireo mpitatitra mpamaky olona, ​​saingy tena ilaina tokoa ny mamboly fahazarana mamaky boky amin'ny ankizy mandritra ny fahazazany. Zhu Yongxin, manam-pahaizana momba ny fanabeazam-pirenena ary mpitondra teninà mpamaky nasionaly, dia nilaza tao anaty tafatafa iray fa mba tena hamahana ny olan'ny "olona ambany" dia tokony hanomboka hatramin'ny fahazazantsika isika ary hikolokolo fahazarana mamaky teny tsara ho an'ny ankizy, indrindra ny famakiana boky. izay manampy amin'ny fambolena ny sain'ny ankizy sy ny fahaizany misaina.
Mitombo hatrany ny fangatahana tsenan'ny boky fanabeazana ho an'ny ankizy an-trano
Raha ny filazan'ny "2017 China Book Retail Market Report", ny haben'ny tsenan'ny mpivarotra antsinanan'i Sina tamin'ny taona 2017 dia 80,32 miliara yuan, ka ny boky ho an'ny ankizy dia 24,64% ny tsena fivarotam-boky iray manontolo, izay manome ny ampahatelon'ny varotra vola. Tao anatin'ny efa-taona nanomboka ny taona 2014 ka hatramin'ny 2017, ny tahan'ny fampiroboroboana ny totalin'ny fivarotana ny bokin-jaza dia nahatratra 50% mahery, izay nambaran'ny indostria ho "hafainganana haingam-pandeha haingam-pandeha avo lenta". Misy trano famoahana an-trano maherin'ny 500 ary boky mihoatra ny 470 ho an'ny ankizy. Ny isan'ireo boky ho an'ny ankizy misy karazana 476000 dia mihoatra ny an'ny Etazonia, laharana voalohany manerantany. ny fireneko dia manana tsenan-jaza lehibe mitentina 367 tapitrisa zaza tsy ampy taona, miaraka amin'ny totalin'ny fanontana isan-taona mihoatra ny 800 tapitrisa, mihoatra ny 300.000 karazany amidy, ary ny totalin'ny varotra mihoatra ny 14 miliara yuan.
Raha ny tatitra momba ny firaketana boky 2017 navoakan'ny Jingdong Books and Entertainment Department, dia nitombo ny fehezan-dalàna momba ny varotra isan-taona, ny boky ara-kolontsaina sy ny fanabeazana no laharana voalohany, ny boky ho an'ny ankizy no laharana faharoa, ary ny boky momba ny literatiora no laharana fahatelo. Raha ny isan'ny mpampiasa dia laharana fahefatra ny isan'ireo boky ho an'ny ankizy tamin'ny 2015; tamin'ny 2016, laharana faharoa izy io, taraiky ao ambadiky ny kolotsaina sy ny fanabeazana ihany, ary somary avo kokoa noho ny boky literatiora; na dia nitohy nitana ny laharana faharoa aza ny isan'ireo boky ho an'ny ankizy tamin'ny taona 2017, dia nifanaraka tamin'ny laharana Ny fahatelo dia ny elanelan'ny mpampiasa ny boky literatiora no nitombo tsikelikely.
Araka ny tatitry ny tahirin-kevitra momba ny tsena boky momba ny Kids 2017 navoakan'ny orinasan-tserasera e-commerce Dangdang, mifototra amin'ny 5 taona nifanesy ny tahan'ny fitomboan'ny Ma Yang mihoatra ny 35% dia nahatratra fitomboana haingana 60% ny Bokin'i Children's Dangdang tamin'ny taona 2017, miaraka amin'ny totalin'ny varotra 410 tapitrisa. Anisan'izany, ireo sokajy telo amin'ny haisoratra ho an'ny ankizy, ny bokin-jaza ary ny rakipahalalana momba ny siansa malaza dia nitombo hatrany.
Ny fahafaha-manao tsena lehibe dia namela ny 90% n'ny trano fanontana manerana ny firenena hanitsaka ny sehatry ny famoahana boky ho an'ny ankizy. Ny firoboroboan'ny tsenan'ny boky an-trano ho an'ny zaza dia nampiditra hery vaovao ho an'ny ankamaroan'ny orinasan-pirinty, ahafahan'izy ireo mahita ny teboka mety hitomboan'ny orinasa. Raha ny marina dia tsy voafetra ho an'ny ao an-trano ihany ny fahafahan'ny orinasa manonta. Eo ambanin'ny torolàlana marina an'ny politika «mivoaka» ao amin'ny firenena, ny orinasan-tserasera dia manana tsena iraisam-pirenena midadasika ihany koa.
"Mivoaka" avelao handeha eran'izao tontolo izao ny boky zazakely sinoa
Ny bokin-jaza ankizy Shina dia nandalo dingana telo: “tsy misy miraharaha”, “takatra tsikelikely sy ekena” ary “fitomboana lehibe”. Miaraka amin'ny fankatoavana iraisam-pirenena ny bokin-jaza sinoa, dia mivelatra sy midadasika kokoa ny sokajin'ny boky ho an'ny ankizy, ary mitombo koa ny fitaoman'izy ireo manerantany. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, rehefa nitombo ny fahefana malemy ao amin'ny firenena, nanitatra ny faravodilanitra ny mpampanonta anatiny tamin'ny alàlan'ny fampidirana boky sy fandraisana anjara amin'ny tsenambaram-boky iraisam-pirenena. Mandritra izany fotoana izany, eo ambany fitarihan'ny hetsika "Belt and Road", boky maro no nafindra tany amin'ireo firenena mifanila amin'ny "Belt and Road", ary ny isan'ny mivoaka dia mitombo hatrany.
Niditra tamin'ny taonjato faha-21, ny tsenan'ny boky ho an'ny ankizy sinoa dia nitombo taha 10% salan'isa isan-taona, mahatratra 40% ny anjaran'ny boky, izay antsoina hoe "folo taona volamena" amin'ny fivelaran'ny boky ho an'ny ankizy sinoa. Manaiky ny indostrian'ny famoahana fa ny famoahana ny bokin-jaza any Shina dia manomboka amin'ny "folo taona volamena" faharoa, ary mifindra amin'ny firenena lehibe famoahana boky ho any amin'ny firenena famoahana boky ho an'ny ankizy isika. Rehefa mandeha manerantany ny famoahana ny bokin-jaza, dia orinasan-tserasera marobe manana ny haavon'ny fanontana boky ho an'ny ankizy sinoa no hiditra tsikelikely amin'ny tsena any ivelany ary hiakatra amin'ny sehatra manerantany feno fanantenana sy fanamby.
Làlana Nan Chang, faritra fitantanana chijiao, vola Niu Dun, dongguan, gd, Sina
© Copyright - 2012-2023: Zo rehetra voatokana.